Jwxo-shiil, Xaajo Xumow Xogtaadii la Ogaal – Rasaasa News
Jwxo-shiil, Xaajo Xumow Xogtaadii la Ogaal
Nov 2, 2009 ONLF, Puntland, somalia, Somaliland
Dadweynuhu ma wada fahmi karaan siyaasiga mooyee, Jwxo-shiil, waxaa haysata dhibaato la xidhiidha siyaasad xumadiisa iyo dambiyada uu ka galay halganka iyo N/hurayaalka, wuxuuna rabaa in uu abuuro arin laggaga jeedsado isaga si uu u sii wado dhibaatooyinkiisii, waxaan rabnaa in arintaas ay dadweynaha Somalida Ogadeeniya ku baraarugsanaadaan.
Shaki kuma jiro in uu yahay wax aad u xun falalka ay samaynayaan maamul gabaleedyada Puntland iyo Somaliland. Waana wax ka soo horjeeda Islaamnimada, walaalnimada, dadnimada, insaaniyada, darisnimada & akhlaaqda suuban. Balse falkaasi waxuu si toosa u dhaawacayaa masaalixda mustaqbalka maamulada sheeganaya qaranimo amaba hiigsanaya in ay yeeshaan mustaqbal wanaagsan.
Iyada oo intaas oo dhan ay xaqiiqa jirta tahay, hadana waxaa lagama maarmaan ah in aan taariikh ahaan u cadeyno in waxa dhacaya ay lug weyn ku leedahay Jabahadda lafteedu. waxaana halkaa ka socda kala aargoosi Jabhada dhaxdeeda ah waxaana u daliila arrimahan;
1. Qaab dhaqanka xubnaha, taageerayaasha iyo Jaaliyadaha ku dhaqan Gobaladaas oo u dhaqma si ka badbadis ah oo ka fog xikmadda, tusaale ahaan waxay sameeyaan kulamo waawey oo heeso, khudbado, loo qabto si aan qarsoodi ahayn iyo falal anshax xumi ka buuxdo oo dadka dariska ah dhibta ugu jirto.
2. Waxay soo galaan xubnaha Jabhadu gobaladaas ama ka baxaan iyaga oo kooxa kooxa ah oo si aan taxadar lahayn u dhaqmaya, arimahaas oo dhibaato ugu filan iyaga iyo gabalada ay martida ku yihiinba.
3. Waxay sameeyaan falal isku dhac Jabhada dhaxdeeda ah oo marmar gaadha heer gacan ka hadal ah iyo is dil ah sida goorihii dhaweyd ka dhacayey Boosaaso iyo Galkacyo.
Arimahaasi waa wax iyagana dhibaato u soo jiida maamulada goboladaas ka jirana wax yeelo u soo jiida, kuwaas oo sida la wada ogg yahay xidhiidho dhanwalba la leh oo nabadgalyadu ka kow tahey la leh guumeysiga, taas oo waji gabax iyo canaan had iyo jeer kala kulma fafalkaas daandaansiga u egg ee ay Jabhadu ka sameyso meelahaas.
Waxaa intaas dheer oo hubaal ah in inta badan ragga madaxda ah ee la qabto in ay ka dambeeyaan xubno muhiim ah oo waliba garabka Admiraalku sameeyaan waxaan tusaale idiin siin karaa;
1. Ninka la yidhaahdo Awliyo oo ay walaala yihiin Ilbir [Ilbir waa masuul ciidanka kooxda Jwxo-shiil ee aaga Dhagabur], waa wakiilka Maxamed Cumar Cismaan ee S/Land wuxuuna la shaqeyaa Safaarada Itoobiya ee Hargeysa dhamaan raga waqooyi lagu qabaqabtana asagaa ka dambeeya.
Maxaa udaliila arrintaas? waxaa u daliil ah qodobadan hoose;
A. Waagii la qabqabtay dad badan oo reer Ogadeeniya ah, gawaadhi badanaa ee la gubay, ayaa odoyaal absame ah la kulmeen maamulka S/land waxayna ka codsadeen in la joojiyo dhibaatadaas si guud, maamulku waxuu sheegay in waxaas ay jabhadu ka dambayso. Waxaase dhacday in Taliyaha Isteeshinka dhaxe ee Hargeysa odoyaashii ku yidhi daliil baan idin tusi, wuxuu soo qabtay Awliyo oo xabsiga la dhigay maxaase dhacey? waxaa Isteeshinkii yimid si Awliya loo soo daayo Wasiirka arrimaha Gudaha S/land Cirro iyo Wakiilka amniga Safaarada Hargeysa ku taal ee Itobiya, isla markiina Awliyo waa la siidaayey taliyihiin arrintii qabashada Awliyo shaqadii ayuu ku waayi gaadhay digniin culusna waa lasiiyey.
2. Labadii nin ee Gaalkacyo ka baxay ee Ciidamada Wardheer dhaxda ku qabteen, waxaa ka dambeeyey Daahir oo ah ku xigeenka Awliyo oo intuu Hargeysa ka yimid oo wiilashii u yimid una dhiibay qalab milatari ka dibna ka diray Taleefan isaga oo nooca gaadhiga, taarikadiisa, wadayday marayaan iyo waxay wataanba u sheegay qaybta nabadsugida Wardheer sidaasaana lagu qabtay. Sidoo kale Daahir wuxuu gudbiyey guriga jabhada ee Gaalkacayo waana kii labadii wiil ee ugu dambeeyey lagu dilay.
3. Labadaa gabal ee S/lan iyo P/lan waxaa had iyo jeer sii mara Admiraalka isaga oo diyaarado kaga daga kagana dhoofa lamana qabto oo waa ninka ka shaqeeya sidii loo soo afjari lahaa ONLF.
4. Ragaas la qabqabto had iyo jeer waa laba qeybood;
Rag wadaninmo lagu ogg yahay oo la rabo in laga takhalusa.
Ama waa Rag ka tirsan Garabka kale amaba Mucaarid ku ah Admiraalka.
5. Waxaa laga dharagsan yahay gudaha wadanka in jabahada si weyn loogu dhaxjiro oo had iyo jeer loo dhigo shir qoolo lagu dabar goynayo, waxaana dhacda ballan kasta iyo bar kulan kasta oo ay qabsadaan Ciidamada JWXO cadwgaa la gaadhsiiyaa waxaana ku dhaca gumaad aad ufaalxun! bil dib u raac-raaca gumaadkii ka dhacey [Gudhis, Kuus-cawl, Arrooy,Cusbaley IWM)!!!
6. Waxaad akhristoow eegtaa hadalka uu yidhi Cabdi Terso markii la qabtay [Terso waa nin ka mid ah shantii wiil ee u dambeeyey ee lagu qabtay Puntland], wuxuu cadaynayaa in Jabahaddu shirqooshay maadaama uu yidhi shir ha la qabto, saraakiishii la socotay ee garabka Admiraalkana lama qabanin ee shantii mucaaradka loo maleeyey ayaa la qabtay.
Hadaba, dadka reer Ogadeeniya ha fahmaan waxyaabaha khatarta ah ee ka dhex jira Jabhadda iyo sida uu Jwxo-shiil xasuuqa iyo dabar goynta uga wado wadanka si uu uga takhaluso wax kast oo dhaqdhaqaaq ah. Waxaana marag ma doonta ah in uu ka dambeeyey Dagaalkii lagu hoobtay ee dhaxmaray garabyada Jabhada iyo waliba UWSLF & garabka Jwxo-shiil ONLF.